I-China ICE High Efficiency Sand Filtration System Yokupholisa Umkhiqizi Nomhlinzeki Wokwelashwa Kwamanzi Towers ' Yubing
Uhlelo lwe-ICE High Efficiency Sand Filtration System Lwe-Cooling Towers 'Circulation Water Treatment
Izinhlayiyana ezibhekele ukungcolisa indawo yokudlulisa ukushisa zincane kunama-microns ama-5. Izihlungi zamanzi zombhoshongo we-ICE eziphakeme zisusa lezi zinhlayiya ezinhle kakhulu ukuhlinzeka ngezinzuzo zangempela zamanzi ahlanzekile okupholisa.
Hlunga High Sand Hlunga
Ukuthuthukiswa kwezihlungi zesihlabathi ezisebenza kahle sekuguqule ukuhlunga kwamanzi okupholisa. Okuqinile okumisiwe manje kungabiza izindleko ngempumelelo zisuswe ku-1/2 micron ngesihlungi se-backwashing esizenzakalelayo. Izihlungi zemultimedia yobuchwepheshe obudala zehlela kuphela kuma-microns ayi-10. Njengoba izinhlayiya zamanzi amaningi ezipholile zikububanzi besayizi engu-1/2 kuya ku-5 we-micron, izihlungi ezisebenza kahle zingcono kakhulu ekususeni lokhu kungcoliswa okunenkinga. Ukuhlunga okusebenza kahle kusho imiphumela eyenziwe ngcono ngesihlungi esincanyana. Izihlungi ezisebenza kahle ze-ICE zisebenzisa isihlabathi se-ultrafine ukuhlinzeka lokhu kuhlunga okuphumelela kakhulu. Isenzo sokugeleza kwamanzi ngaphesheya kobuso bezindaba ezinhle kakhulu kuvimbela ukuxhuma okusheshayo ngokucindezela ukungcola kuye endaweni yokugcina. Ukusebenza kokuhlunga akukhona nje kuphela ukuthi kuthuthuka kakhulu, kepha izihlungi zidinga amanzi abuyela emuva angafinyelelwa kaningi ku-10.
Izindleko zokuhlunga ezisebenzayo
Izihlungi ezisebenza kahle ze-ICE zisebenza kahle kakhulu ekususeni izinhlayiya ezinhle kakhulu ezipholisa imibhoshongo emoyeni. Lokhu kusebenza okuthuthuke kakhulu kuvumela lezi zihlungi ukuthi zikalwe kasayizi o-4 kuye ku-5 omncane kunezihlungi ze-multimedia ngenkathi zinikeza amanzi ahlanzekile kakhulu. Izihlungi zeMultimedia side-stream 5 to 10% of the recirculation rate, while high efficiency filters only need 1 to 3%. Ungadlali ngemali ngezihlungi ezinkulu ezingasebenzi kahle usebenzisa ubuchwepheshe obudala.
Izinzuzo Zamanzi ahlanzekile ahlungiwe
•Izindawo zokudlulisa ukushisa ezihlanzekile zenza imishini isebenze kahle kakhulu okuholela ekunciphiseni izindleko zamandla.
•Impilo yemishini iyandiswa ngenxa yokuncipha kwamazinga wokugqwala.
•Ukuphumelela kokwelashwa kwamagciwane kuyathuthukiswa okuholela endaweni yokusebenza enempilo.
•Ukugcinwa kwemishini nesikhathi sokuphumula esingahlelwanga isikhathi kuyehla ngenxa yokuhlanza ama-sumps, ukugcwalisa kanye nokuhwebelana okushisa.
Olandelayo: Uhlelo lwe-ICE Industrial Reverse Osmosis lwe-Cooling Tower Water System
ukupholisa ukuhlunga amanzi embhoshongweni
Ukupholisa uhlelo lokuhluza amanzi
ukusefa kwamanzi okusabalalisa umbhoshongo
uhlelo lokuhlunga izimboni
zezimboni isihlabathi filtration uhlelo
ukusefa kwesihlabathi kombhoshongo wokupholisa
uhlelo lokuhlunga isihlabathi